Indlu ye-Lodge Kiltanon Tulla Co Clare V95 A3W6 - I-Airbnb
Indlu ye-Lodge Kiltanon Tulla Co Clare V95 A3W6
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguPaul & Joan
I-Kiltanon House kunye neloji zibekwe kumhlaba omhle kwaye zibucala kakhulu, ukuba ujonge uxolo olupheleleyo le yeyakho. Indawo yomlingo enomtsalane kunye nothando kodwa ukulunga kobomi bale mihla. I-Wifi, iTV yesathelayithi, ishawa yombane kunye nesitovu samaplanga esibaswayo. Ingoma yeentaka, kunye namahashe atya kufutshane!
I-19th Century ibuyisele indawo yokulala enegumbi elinye elibekwe kumhlaba weKiltanon House ilele kwezona ndawo zinoxolo nezibukekayo eIreland.Inkwenkwezi ezintlanu ngexabiso elifikelelekayo indawo yokulala ilala abantu abathathu ngokukhululeka.
I-Kiltanon House yaqala ngo-1800 kwaye yayilikhaya le-O 'Moloney clan ezininzi zezakhiwo ziye zabuyiselwa ngothando kwaye zibonelela ngendawo yokuhlala yobunewunewu yomhambi kwenye yezona ndawo zinoxolo kwaye zabucala eIreland .Ukuba uthanda ukuhamba uya kukuthanda. iindlela ezithe cwaka ezinamagqabi ezijikeleze le ndawo kunye nabathandi bendalo baya kuvuka rhoqo kusasa ukuya kwi-chorus yeentaka. IKiltanon iphakathi kweemayile ezimbini kwilali yaseTulla kwaye ikufutshane nemida yendawo eyaziwayo yaseBurren, kwisithuba semizuzu engamashumi amabini edolophu enkulu yase-Ennis kunye nemizuzu engamashumi amathathu anesihlanu kwisikhululo seenqwelomoya saseShannon. Idolophu yaseGalway yiyure yokuhamba ngemoto.
4.97 · Izimvo eziyi-355
IKiltanon ijikelezwe ngamaphandle amahle anohambo olukhulu kwaye yindawo enoxolo, enomlingo kunye neyothando. Ikufuphi no-Ennis Limerick kunye ne-Burren njl.
Silapha ukunceda kunye nokukhokela kangangoko sinako. Sifumaneka iiyure ezingama-24 njengoko sihlala kufutshane neloji. Ikhuselekile kwaye iyimfihlo